Madaxweyne Saalax oo Sacuudiga loo duuliyay - BBC Somali
Madaxweyne Saalax oo Sacuudiga loo duuliyay
4 Juunyo 2011
Image caption Madaxweynaha Yemen Cali Cabdalla Saalax
Madaxweyne Saalax iyo qoyskiisu shalay ayay dayuurad ka raaceen dalka Yemen iyagoo ku sii jeeda waddanka Sacuudiga. Laakiin wiilkiisa iyo kuwo uu adeer u yahay oo iyagu ah awooddiisa milateri ayaa weli dalka Yemen ku sugan. Wiilasha uu adeerka u yahay oo kala ah: Ammaar iyo Yahia waxay Maraykanka kala shaqeeyeen la dagaallanka argagixisada. Dad badan oo Yemen jooga waxay rumaysan yihiin in joogitaankooda xilligan kala guurka uu muhiim yahay, waxaana soo dhoweeyay dowladaha gobolka iyo quwadaha caalamka.
Madaxweyne Saalax waxaa uu Sacuudiga ugu duulay si qalliin loogu sameeyo kaddib markii uu ku firir gantaal saddex inch gudaha u galay jirkiisa meel wadnaha hoostiisa ah markii Jimcihii gantaalka lagu dhuftay xarunta madaxtooyadiisa. Madax dowladda ka tirsan waxay weerarkaas ku eedeeyeen rag ka tirsan qabiil xulafo la ah mucaaradka madaxweynaha, waxaana ku dhintay toddoba qof, hase ahaatee qabiilka la eedeeyay way beeniyeen inay weerarkaas iyagu ka dambeeyeen. Qof siyaasadda dersa oo ku dhow madaxweyne Saalax waxaa soo jeediyay in weerarkii Jimcihii dhacay uu ahaa bambaane uu rakibay qof ka tirsan qolada madaxweyne Saalax hase ahaatee way adag tahay in taas la xaqiijiyo.
Mr Saalax oo jooga maqaam uu aad u daciifay, waxaa uu ka tegay waddankii uu soo xukumayay muddo 33 sano ah, iyadoo qas siyaasadeed uu ka taagan yahay, looguna baaqayo inuusan dib dambe xafiiska ugu soo noqon. Waxaa jirta calaamad su'aal ku saabsan in madaxweynaha aan waxba maqlayn, oo isagu dhowr jeer oo hore sheegay inuu xukunka ka degayo, uu soo noqon doono iyo in kale. Madaxweyne kuxigeenkiisa ayaa hadda ah kusimaha madaxweynaha. Dad badan Yemen jooga waxay tan u arkaan inay tahay wejigii 2aad ee hindisihii ay soo jeediyeen waddammada golaha iskaashiga khaliijka Carabta ee loola jeeday in lagu soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee waddanka Yemen kaas oo madaxweyne Saalax hadda kahor uu diiday inuu saxiixo. Wejiga 1aad waxaa uu ahaa in madaxweyne Saalax uu awoodda ku wareejiyo madaxweyne kuxigeenkiisa, taasoo ay kuxigi lahayd in la qabto doorasho waqti hore dhacda.